Warqad Furan oo ku Socota Madaxweynaha J.S.L | Himilo Media Group
Warqad Furan oo ku Socota Madaxweynaha J.S.L
UJ: Xalka Saxmadda Hargeysa ee xad Dhaafka ah (Blue Print)
Marka hore waxaanu kugu salaamaynaa Salaanta Islaamka ee Qaalliga ah, Annaga oo ah Aqoonyahanada magacaydoodu hoos ku xusan yihiin waxaanu halkan Mudane Madaxweyne kuugu soo gudbinaynaa dhibta soo wajahday Caasimada Hargeysa gaar ahaan suuqa dhexe oo Saxmaddu aad u cakiran tahay iyo Caasimaddu guud ahaan, taasoo saxmadda ku sii kordhinaysa Caasimada, Xalka ugu habboon ee dhibtana lagaga bixi karo.
FG: Saxmadda intan leeg waxa sababay magaalada oo aan lahayn Istaamo ay baabuurtu ka baxaan soona galaan oo gaar ah iyo Baarkino (Parking Spaces) la dhigo baabuurta lagana kaxaysto marka la doono.
Runtii Istaanada Baabuurta ee Maanta jiraa maaha istaano gaar loogu sameeyey gaadiidka kala duwan ee waa meelo ay ka cidhiidhsadeen gaadiidku magaalada dhexdeeda.
WAXAANU soo jeedinaynaa In magaalada laga sameeyo “laba Istaan” oo Bari iyo Galbeed ah. Labadan Istaan oo Noqon kara kuwa Geeska Afrika ugu waaweyn, shaqeyn karana tobanaan sanadood Meelaha Istaamadu banneeyaana waxa laga dhigayaa goobo Parkings ah.
Cidhiidhiga xad dhaafka ah ee Caasimadu wuxuu sababay:
Shilal badan (Dhimasho, Dhaawac iyo Khasaare kale ba leh,) taasi oo maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaysa.
In Baabuurta parking ka dhigtaan waddada laamida ah dhexdeeda oo cidhiidhi xoog ah galisa isu socodka baabuurta iyo dadweynaha, hadal haynta u badan ee dadka suuqu waxa weeyi “Baabuurkii waxaan kaga immi meel fog, oo meel aan dhigo waan waayey”.
Maanta Magaalada Hargeysa gaar ahaan suuqa dhex waxa jira waddooyin looga guuray basaska markii ay Basasku laftoodu waayeen meel istaan ah oo ay baabuurta dhigtaan, waddooyinkaasi oo gaadhay ama ka badan ilaa Dhowr iyo toban wado oo suuqa dhexdiisa ah.
FG; Waddooyinka Suuqa Dhexe Dawladdii Ingiriisku waxay u qorsheysay in mustaqbalka laga faa’iiido sababtoo ah way waaweyn yihiin, laakiin waxay u baahan yihiin Nidaamin. Hoosna waxaan ku soo jeedinayaa xalka ugu haboon ee ay nala tahay oo ka kooban TODDOBA qodob.
Marka ugu horreysa waxaanu soo jeedinaynaa in muddo lix(6) bilood ah la joojiyo soo dejinta baabuurta ee dalka marka laga reebo baabuurta muhiimka ah, sida Caalamkaba ka dhacda.
Mudane Madaxweyne Dhowrkii bilood ee u dambeeyey waxa Dalka soo galay ilaa Dhowr kun oo baabuur cusub ah, welina way socdaan soo dejintoodii. Sidaas ayaa Mudane Madaxweyne loogu baahan yahay in muddo la joojiyo Baabuurta.
Waxay nala tahay inay ku habboon tahay in Magaalada loo sameeyo laba istaan oo baabuurtu ka baxaan kana soo galaan oo kala ah:
Istaanka weyn oo ah Galbeedka, waxa laga samayn karaa meesha ay tahay xarunta xannaanaynta dhirta iyo kobicinta dhirta u dhawna Gargaar Hospital iyadoo Basaska ka imanaya Galbeedka ka weecanayaan Gooladda Saldhiga Dhexe, baabuurta waaweyna meel looga sameeyo.
B) Istaanka labaad waxay nala tahay in laga dhigo Sadhigga Booliska New Hargeysa iyo Harreerihiisa oo hore u ahaa Rugta Kuttubta (Ex-Hargeysa Libraray).
In halka laga raro Istaanada laga dhigo baarkin ( Parking For Vehicles). Baarkinadan waxay si degdeg ah oo fudud culeyska uga qaadayaan saxmada magaalada dhexdeeda.
Baarkinkanada waxa xoog u isticmaalaya dadka suuqa dhexe iyo Agagaarkiisa ka shaqaysta dakhli badana wuxuu ka soo geliyaa Dawladda Hoose.
In Danyarta loo sameeyo meelo ku habboon ganacsigooda.
In Waddooyinka Suuqa Dhexe laamiyada Cusub la mariyo si dadku u gartaan in meeshani tahay waddo.
( Muhiim):- In Qorshaha Caasimadda Harreereheeda dib loogu noqdo oo loo qorsheeyo sida Waddada Boqol iyo kontonka ee siddeed haad ah. Tusaale ahaan waddada ka baxda Sacaadadiin galbeedkiisa ilaa Degmada 31 May iyo Waddada ka baxda Shiraaqle Ilaa Maxamed Mooge waxa dib loogu qorshayn karaa mid lix siday kolba u suuroobayso. Caasmidaha Adduunka waxa lagu yaqaanaa Waddooyin waaweyn.
In La sameeyo goobo jardiinooyin ah oo billicda Caasimadda Kor u qaadda
Fg: Goobaha ay baarkinadu ka soo baxayaan waxa ka mid ah Afar goobood oo waaweyn iwm.
Istaanka Jig Jiga Yar 2. Istaanka Idaacada/ Xero Awr 3. Istaanka Berbera 4. Istaanka Calaamadaha 5. Istaanka Siineey iyo Qaar kale ba.
NB: Sannadkii 2016kii ayaanu soo jeedinta u gudbinay Dawladda Hoose ee Hargeysa
Alle Sida Saxa ah Hayno Waafajiyo
Labada Aqoonyahan ee Soo Jeediyay Xalkan Caasimaddu Saxmadda kaga baxayso waa:
Axmed Maxamed-Rashaad Sh Yuusuf
CabdXakiim Maxamed X. Xuseen